Saturday April 09, 2022 - 16:59:48 in Wararka by Super Admin
Anigoo Ah Maamulka Guud ee Shabakedda Wararka ee Xogreeb.com, waxaan Halkan ai buuxda uga Raali-gelinayaa Ganacssade Maxamed Shugri, Maqaal aan si ku Talo-gal ahayn loogu daabacay Shabakada Wararka ee Xogreeb oo ay daabaceen qaar kamid ah ah hawl-wadeenada shabakadu.
Warkaas waxa uu nooga baxay si khalad Madbaci a, wanaan ka raali-gelinaynaa masuulkaa ganacsadaha ah, isla Markaana ah masuul sharaf iyo karaamo ku dhex leh bulshada.
Mar labaad iyo mar sadexaadbaa waxa uu maamulka shabakada Wararka ee Xogreeb raali gelin buuxda siinayaa oday Ganasade Maxamed Shugri, oo sida aanu horeba u sheegnay ah masuul karaamo badan.
maamulka shabakada baahin kooban kadib waxanu markuu ogaaday baahinta maqaalkaas ka saaray baraha baahineed ee shabakada Wararka ee Xogreeb. waxanaanu talaabo ku haboon ka qaadnay Weriyiihii maqaalkaas ku baahiyey shabakada Xogreeb.
Maamulka guud ee Shabakada Wararka ee Xogreeb news.